के शाहरुख खान धुम-४ मा खलनायकको भूमिकामा देखिएलान ?
जनतापाटी सोमवार, जेठ २७, २०७६, ०९:४०:०० मा प्रकाशित
एजेन्सी । बलिउड स्टार शाहरुख खानले आदित्य चोपडाको ब्लकबस्टर हिट सिरिज ‘धुम’को चौथो अंकमा खलनायकको भूमिकामा देखिनसक्ने बताइएको छ।
यसअघि पनि शाहरुख ‘धुम-४’ मा खलनायकको भूमिकामा देखिन सक्ने समाचारहरु आएका थिए। तर, शाहरुखले भने त्यतिबेलै यीसब जिज्ञासाहरुलाई टार्दै आफू आनन्द एल रायको फिल्म 'जिरो'मा व्यस्त रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
‘जिरो’ सन् २०१८ मै रिलिज भइसकेको छ। यो फिल्म बक्स अफिसमा नराम्रोसँग पछारिएको थियो। यो फिल्म फ्लप भएपछि शाहरुखका समर्थक उनको नयाँ फिल्मको प्रतीक्षामा छन्। तर, शाहरुख अहिले कुनै पनि फिल्ममा काम गरिरहेका छैनन्। उनले राकेश शर्माको बायोपिक फिल्म ‘सारे जहाँ से अच्छा’मा पनि नखेल्ने बताइसकेका छन्। अहिले पूरापूर समय खाली रहेका शाहरुखले के धुम-४ मा खलनायकको भूमिका निभाउलान् ? उनका फ्यान तथा फिल्मकर्मीका लागि पनि कौतुहलताको विषय बनेको छ।
प्लाष्टिकमुक्त अभियान प्रभावहिन बिहिवार, कार्तिक १४, २०७६, १२:१०:००
पहिरो हटाएपछि बेनी–जोमसोम सडकमा सवारी आवागमन सुचारु मंगलवार, पुष १५, २०७६, ०९:२८:००